23.02 Tsy miova Jeso
Ny sakafom-panahintsika anio Zoma 23 Febroary 2018 dia ny Lioka 7.18-23, no teny hovakiantsika ka hojerentsika ao anatin' io teny io ny hoe inona lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
18 Ary ny mpianatr’ i Jaona nanambara izany rehetra izany taminy.
19 Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hankao aminy, dia naniraka azy hankany amin’ ny Tompo hanao hoe : Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika ?
20 Ary nony tonga tany aminy ireo lehilahy ireo, dia nanao hoe : Jaona Mpanao-batisa naniraka anay hankatỳ aminao hanao hoe : Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika ?
21 Ary tamin’ izany ora izany Jeso dia nahasitrana olona maro tamin’ ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro.
22 Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe : Mandehana hianareo, ambarao amin’ i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazan-tsara.
TSY MIOVA JESO
Ny fisalasalantsika na ny zavatra tsy azontsika dia tsy mampiova ny hery sy ny fahefan’i Kristy.
Avy ao an-tranomaizina.
Mandalo fizahan-toetra mahamay i Jaona mpanao batisa noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Ao anatin’ny fahoriana izy no te-hanamafy orina ny amin’ny hoe : Iza tokoa moa Jeso ?
Mety niandry Mesia izay hanongana ny fanjakana Romana sy ny fanjanahan-tany izy ary hanafaka azy avy ao an-tranomaizina.
Ny fitoana nijanonany tao an-tranomaizina va re no nanova ny fandresen-dahatra nananany momba an’i Jeso ? (jereo : Jaona 1.29, 36).
Marina fa mampahory ny fitoerana ao an-tranomaizina, saingy araka ireo hita momba ireo mpanompon’Andriamanitra voatantara ao amin’ny Soratra Masina, dia naneho ny voninahiny tao an-tranomaizina ny Tompo, araka ny ohatry ry Josefa, Daniela, Paoly sy Silasy sy ny maro...
Iza moa Jeso ?
Namaly mivantana sy mazava ny fanontaniana napetrak’i Jaona mpanao batisa ve Jeso (18) ? Fa nahoana ?
Nisy heviny lehibe nefa ny valin-teny nomeny (22-23) : Tsy miova araka ny zava-tsarotra andalovantsika akory ny maha-Jeso an’i Jeso.
Noho izany, na inona mitranga dia tokohy hahery sy haharitra amin’ny fiderana isika (Hebreo 13.8).
Fantatra amin’ny voany ny hazo.
Omen’i Jeso ny ohatra hahafantarana ny momba ny olona iray : ny voa.
Ny olona nohavaozina ao anatiny dia ahitana voa miendrika izany eo ivelany.
Saingy ny zava-misy mateti-pitranga ankehitriny dia olona miha-very ny maha-izy azy.
Olona milaza ny tenany ho kristiana saingy miaina toy ny tsy mpino.
Tahirizo ny maha-kristiana anao.
Derao ny Tompo Jeso Kristy noho ny asany ho anao sy izay akaiky anao,
na dia toa ela aza ny fahatanterahan’ny valin’ny vavakao.